कोलेस्टेरोल भनेको के हो ? कसरी बढ्छ ? – Nepali Health
२०७३ असोज १७ गते ११:०१ मा प्रकाशित
डा. सुदीप केसी
कोलेस्टेरोल रगतमा भएको बोसो ( लिपिड ) को एक प्रकार हो । यसको उत्पादन कलेजोमा हुन्छ र रगतको माध्यमबाट कोषहरू सम्म पुग्दछ । कोलेस्टेरोल आवश्यकता छ तर रगतमा आवश्यकता भन्दा बढी मात्रामा रहेमा यसले शरीरलाई नराम्रो असर गर्दछ ।
कोलेस्टेरोल नाप्न किन जरुरी छ ?
कोलेस्टेरोल स्वयंमा बिरामीको रुपमा नदेखिने भएता पनि यसको साथमा ब्लडप्रेसर, डायबिटिज, उमेर, लिंग, जात, धुम्रपान गर्ने-नगर्ने जस्ता कुराहरुबाट सम्बंदित व्यक्तिलाई हृदयघात, स्ट्रोकको खतराको स्तर निकाल्नको लागि यसको जाच गर्न जरुरी छ ।
धेरै बोसो, ट्रान्स बोसो तथा कोलेस्टेरोलको मात्रा खानाले , दैनिक शारीरिक अभ्यास वा कसरत नर्गनाले पनि यस्तो समस्या बढ्दै जान्छ ।
तौल बढ्दा शरीरमा भएको राम्रों कोलेस्टेरोल घट्दै जान्छ र नराम्रो बढ्दै जान्छ ।
पारिवारिक पृष्ठभूमि- तपाईँको परिवारमा कसैलाई कोलेस्टेरोल छ भने तपाईँलाई पनि हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
साधारणतया २० बर्षको उमेर पश्चात नराम्रो कोलेस्टेरोल बढ्न सक्दछ ।
कोलेस्टेरोलको रिपोर्ट कसरी थाहा पाउन सकिन्छ ?
कोलेस्टेरोलको स्तर बढेको बिरामीले महसुस गर्दैन । रगत परीक्षण गराउनु नै कोलेस्टेरोलको स्तर थाह पाउने तरिका हो । रगत परीक्षण पश्चात आएको रिपोर्टलाई विभिन्न श्रोतमा बताइए अनुसार निम्नानुसार विभाजन गरि बुझ्न सकिन्छ; यस सम्वन्धी बिस्तृत निर्क्यौल गर्ने काम भने सम्बंदित डाक्टरले गर्नेछन ।
कुन अवस्था कति खतरनाक ?
यसबाट जोगिनको लागि बेलैमा रगत परीक्षण गराई ढुक्क हुनुहोस । त्यस्तै तपाईँले तपाईँले दैनिक शारीरिक अभ्यास वा योगा गर्ने, बोसो रहित खाना खाने, धुम्रपान नगर्ने, शरीरको तौल बढ्न नदिई कोलेस्टेरोलको खतराको रोकथाम गर्न पनि सक्नुहुन्छ ।
चिकित्सा शास्त्र तर्फको नोबेल पुरस्कार जापानी वैज्ञानिक योशिनोरी ओशुमिलाई